မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | Myanmar Seed Information Portal
Home » Faq » မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မျိုးစေ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့်နှင့် စပ် လျဉ်း၍ သိချင်ပါတယ်။
မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများစာအုပ်မှ ပုံစံ (၁) တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဖရဲ၊ သခွား၊ ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ ပြောင်းမျိုးစေ့မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဘယ်လို data တွေကောက်ယူဖို့ သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။
မျိုးစေ့ဌာနခွဲနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ရက် ၉၀ စပါးမျိုးရဲ့ လက္ခဏာတွေ သိချင်ပါတယ်။ ထိုင်းနှံကောက်စပါး မျိုးက မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက် မှတ်ရပြီးလား သိချင်ပါတယ်။
ထိုင်းနှံကောက်စပါးမျိုးက အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ် မရရှိသေးပါ။ ယခု NSC သို့ တင်ပြထားပါတယ်။
မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် မျိုး ပွားလိုင်စင်လုပ်ချင်ရင် ဘာလိုအပ်ပါ သလဲ။
သူများဆီက မျိုးစေ့ကို တစ်ဆင့် ယူပြီး ဖြန့်လိုလျှင်၊ မူလမျိုးစေ့ပိုင် ရှင်၏ ခွင့်ပြုဝန်ခံကတိယူခဲ့ရန်၊ မျိုး စေ့ဌာနခွဲရုံးချုပ်သို့ လျှောက်လွှာ နှစ်စုံဖြည့်ရန်၊ လိုင်စင်ခ သုံးသိန်း ကျပ်ကုန်ကျပါမည်။ အသေးစိတ်ကို ထပ်မံသိလိုလျှင် မျိုးစေ့ဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိချင်ပါ တယ်။
Law and regulation revised (၂၂.၉.၁၅) and 22.2. (1) (1). Pdf ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် မျိုးစေ့မှတ်ပုံတင် အကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်။
အောက်ပါ Link တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မျိုးစေ့ထိန်းချုပ် သည့် ဥပဒေရှိပါသလား။ နိုင်ငံခြားမှ မျိုးသစ် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း အတွက် လိုင်စင်ဘယ်လိုလျှောက်ရ မလဲ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က တင် သွင်းထားသော မျိုးစေ့တွေကို နောက်တစ်ဦးက ထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုး ဖြန့်ဖြူးခွင့်ရှိသလား။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးစေ့ထိန်းချုပ် သည့်ဥပဒေရှိကြောင်း၊ မျိုးစေ့ ဥပဒေအရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာ သော မျိုးစေ့များကို တရားဝင် ဖြန့် ဖြူးတင်သွင်းနိုင်ရန် လိုင်စင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးတစ် ယောက်က တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး တင်သွင်းထားသော မျိုးဖြစ်ပါက အခြားသူမှ ထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုး ဖြန့် ဖြူးခွင့်မရှိပါ။
ပဲတောင့်ရှည်၊ ပြောင်းစေး (အဖြူ)၊ ရုံးပတီ၊ ခရမ်း၊ မုန့်ညှင်းဖြူ၊ ဂေါ်ဖီ၊ ငရုတ် (အစပ်)၊ ခရမ်းချဉ်တို့၏ မှတ် ပုံတင်ထားသည့် မျိုးအမည်များကို သိချင်လို့ပါ။
မျိုးအမည်စာရင်းများကို အောက်ပါ link တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အပင်တင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်ရ မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ သိချင်ပါ တယ်။ (ဒူးရင်း၊ ကြက်မောက်)
ဒူးရင်း၊ သြဇာပျိုးပင်များအား တရုတ်နိုင်ငံမှတင်သွင်းကာ စီးပွား ဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ် ကြောင်း သိရသဖြင့် အပင်မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စမ်သပ်စိုက်ပျိုးခွင့်မှ ကင်းလွတ်၍ သီးနှံပင်နှင့် သက်ဆိုင်သော အချက် အလက်များပြည့်စုံစွာပြုစု၍ မျိုးစေ့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ (TSC) သို့ လျှောက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါသည်။